विश्वकै मानिस चकित हुने यो बिबाहको खबर ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/विश्वकै मानिस चकित हुने यो बिबाहको खबर !
काठमाडौं । विश्वमा हरेक दिन नयाँ र अनौठा कुराहरु हुन्छन् । यस्ता कुराहरु जुन थाहा पाउँदा सहजै विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तै, हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा हरेक दिन नयाँ र फरक घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् । यो बिचमा उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलाहालाई देखेपछि दुलहीले विवाह गर्न अस्विकार गरेको समाचार बाहिर आएको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘ममाथि धोका भएको छ।’ समाचार अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । भएको के भने उनीहरुको उमेर अन्तर धेरै देखिएको थियो । त्यसैले बेहुलीले बेहुला ठुलो भएको भन्दै विवाह गर्न नमानेको खबर छ । त्यतिबेला आमाले छोरीलाई ठूलो दबाब दिइन् तर उनले मानिनन् ।
रिपोर्टका अनुसार निकै सम्झाएपछि पनि जब छोरी मानिनन् तब दुलहीकी आमा नै दुलहासँग विवाह गरेर आगरा गइन् । १७ वर्षीया ति दुलहीले यसै वर्ष १२ कक्षाको परीक्षा दिएकी छिन् । ती युवतीकी आमाले आगरामा बस्ने आफ्नी काकीकी नन्दका छोरासँग उनको सम्बन्ध तय गरेकी थिइन् । बेलुकी आगराबाट दुलाहा जन्ती लिएर दुलहीको घर पुगे ।
जब दुहली वरमाला लिएर स्टेजमा पुगिन् तब दुलहालाई देखेर भड्किइन् । दुलहीले विवाह अघि जुन केटाको तस्वीर देखाइएको थियो त्यो उनी नभएको बताइन् । जब छोरीलाई विवाहका लागि मनाउन सकिनन् तब आमा नै सबैलाई छोडेर आफैं दुलहासँग आगरा गइन् । बेहुलीका अनुसार तीन वर्षअघि उनको पिताको मृत्यु भएको थियो । उनका एक बहिनी र एक भाइ छन् । एजेन्सी